प्रशासनिक संरचना दरिलो भए योजना लागू गर्न गारो छैन «
प्रशासनिक संरचना दरिलो भए योजना लागू गर्न गारो छैन
प्रकाशित मिति : असार २९, २०७५ शुक्रबार
संघीय सरकारअन्तर्गत केन्द्रमा राष्ट्रिय योजना आयोग रहेजस्तै प्रदेश सरकारले पनि प्रादेशिक योजना आयोग गठन गरी प्रदेशको विकास–निर्माणलगायतका कामका विषयमा योजना बनाउन थालिसकेका छन् । प्रदेशको योजना बनाउने काम प्रादेशिक योजना आयोगको हो । प्रदेश नम्बर ५ को सरकारले पनि प्रादेशिक योजना आयोग गठन गरी आफ्नो काम अघि बढाएको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री आयोगका अध्यक्ष हुन्छन् भने उपाध्यक्षलगायतका सदस्यहरू प्रदेश सरकारले मनोनीत गर्छ । प्रदेश ५ को आयोगको उपाध्यक्षमा डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ मनोनीत भई काम सुरु गरेको करिब चार महिना बितेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा निर्देशकलगायतका पदमा रही काम गरेर अनुभव सँगालेका डा. श्रेष्ठ आर्थिक विश्लेषकका रूपमा पनि चिनिन्छन् । अर्थशास्त्रमा अस्ट्रेलियाबाट स्नातकोत्तर र अमेरिकाबाट पिएचडी (विद्यावारिधि) गरेका ५१ वर्षीय डा. श्रेष्ठ अर्घाखाँचीका स्थायी बासिन्दा भएकाले यस प्रदेशका बारेमा जानकारसमेत छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक, सिद्धार्थनगर शाखामा कार्य गरिसकेको हुनाले पनि यस क्षेत्रका बारेमा उनीसित विशेष जानकारी छ । प्रादेशिक योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठसँग प्रदेशका योजनालगायतका विषयमा कारोबार संवाददाता मनोरञ्जन शर्माले गरेको कुराकानीको सार :
प्रदेश ५ को योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । कसरी अगाडि बढेका छन् प्रादेशिक योजनाका काम ?
योजनाको प्रारम्भिक काम सुरु भएको छ । खासगरी प्रदेशको अवस्था कस्तो छ भन्ने सम्बन्धमा तथ्यांकहरू संकलन हुँदै छन् । पर्याप्त तथ्यांकको अभाव खड्किएको छ । सरोकारवालाहरूसँग छलफल र अन्तक्र्रिया भइरहेको छ । प्रदेशको संरचनाहरू प्रारम्भिक चरणमा रहेको र पूर्ण नभएको हुँदा योजनाको काम पनि त्यहीअनुरूप बढिरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध प्रदेश खुसी जनता’ बनाउने दीर्घकालिन सोच लिएको छ । यसले भौतिकका साथै सामाजिक विकासलाई पनि इंगित गर्छ ।
प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध प्रदेश खुसी जनता’ को लक्ष्यका साथ योजनाबद्ध विकासको बाटोमा अघि बढ्ने भनेको छ, योजनाबद्ध विकासको मार्गचित्रमा के–के पर्छन् ?
प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध प्रदेश खुसी जनता’ बनाउने दीर्घकालिन सोच लिएको छ । यसले भौतिकका साथै सामाजिक विकासलाई पनि इंगित गर्छ । यसका लागि गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्, तर साधनस्रोत सीमित छ । तसर्थ प्राथमिकता निर्धारण गरेर जानुपर्ने खाँचो छ । साथै, प्रदेशभित्रका सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास गरी यस प्रदेशका सबै बासिन्दालाई विकासको अनुभूति दिनु जरुरी छ । यसका लागि योजनाले मार्गदर्शन प्रदान गर्छ । प्रदेशको समृद्धिका लागि के, कहाँ, कसले, कसरी र कहिले गर्ने भन्ने कुरा पहिल्याउनु नै योजनाबद्ध विकासको मार्गचित्रभित्र पर्छन् ।
यस प्रदेशले आधारभूत भौतिक पूर्वाधारहरूको व्यवस्था गरी कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई समृद्धिको आधारका रूपमा लिएको छ ।
संघीय सरकारका योजनाहरूबाहेक प्रदेश सरकारका नयाँ योजनाहरूमा महत्वपूर्ण के–के रहेका छन् ?
प्रदेश सरकारको योजनाले प्रदेशको वस्तुस्थिति र आवश्यकतालाई नजिकबाट नियाल्न सक्छ, सोहीअनुरूप योजना तर्जुमा हुन्छ । यस प्रदेशले आधारभूत भौतिक पूर्वाधारहरूको व्यवस्था गरी कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई समृद्धिको आधारका रूपमा लिएको छ । साथै, शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधारमा जोड दिई सक्षम जनशक्ति तयार पार्ने ध्येय लिएको छ । ठूला आयोजनाहरू संघीय सरकारले बनाउने हुँदा मझौला आयोजनाहरू प्रदेश सरकारको क्षेत्रभित्र रहेका छन् । आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले पनि यस प्रदेशले लिने दिशालाई संकेत गरेको छ ।
प्रदेश ५ मा तराई मधेस, भित्री मधेस, पहाड र केही हिमाली क्षेत्र पनि रहेका छन् । योजना तर्जुमा र लागू गराउन कत्तिको कठिनाइ छ ?
प्रदेश ५ मा वास्तवमा नेपालकै सानो रूप छ । त्यसैले तीनै भौगोलिक क्षेत्रको विशेषताबाट फाइदा लिन सकिन्छ । यी तीनै क्षेत्रलाई एकआपसमा फाइदा हुने गरी योजना तर्जुमा गर्न सकिने देखेको छु । यस प्रदेशमा पहाडी र हिमाली क्षेत्र भए पनि पहुँचका हिसाबले त्यति कठिन पनि छैन । प्रदेशको दरिलो प्रशासनिक संरचना भए योजना लागू गर्न गारो छैन ।
कर्मचारी समायोजनमा भएको ढिलाइ, लामो समयको केन्द्रीकृत मानसिकता, काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन हुन केही समय लाग्ने हुँदा प्रदेश सरकारले पूर्ण क्षमतामा काम थाल्न नसकेको स्थिति मात्र हो ।
प्रादेशिक योजना निर्माण गर्दा संघीय सरकार र राष्ट्रिय योजना आयोगको हस्तक्षेप हुने चर्चा छ । राम्रा योजनाहरू भए संघीय सरकारबाटै बनाइने र अरू खासै महत्व नभएका योजना प्रादेशिक योजना आयोगमा पठाइने गरेको भन्ने सुनिन्छ, सत्य के हो ?
त्यस्तो होइन, प्रदेश सरकार आफैंमा नयाँ संरचना होे । त्यस्तै प्रादेशिक योजना आयोग पनि नयाँ संरचना भएकाले सुरुवातमा बाटो पहिल्याउन केही अलमल हो । संंविधानअनुसार नेपालको समग्र विकास र समृद्धिका लागि तीनै तहका सरकारको गहन भूमिका रहेको छ र तीनै तहले सहकार्य र समन्वयमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कर्मचारी समायोजनमा भएको ढिलाइ, लामो समयको केन्द्रीकृत मानसिकता, काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन हुन केही समय लाग्ने हुँदा प्रदेश सरकारले पूर्ण क्षमतामा काम थाल्न नसकेको स्थिति मात्र हो । स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षमता अभिवृद्धि हुने क्रममा छ र थप वृद्धि गर्नुपर्ने खाँचो छ ।
बजेटमा संघीय सरकारमै निर्भर भएजस्तै योजनामा पनि केन्द्रमै निर्भर हुनुपर्ने त होइन ?
प्रदेशलाई सीमित राजस्वको अधिकार दिइएको छ र सुरुवाती अवस्थामा प्राप्त राजस्वका अधिकार प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केही कठिनाइ हुने देखिन्छ । प्रदेशलाई दिएका पाँचवटा करमध्ये एउटा कृषि आयमा करबाहेक अरू स्थानीय तहसँग साझेदारीमा संकलन गर्नुपर्ने हुँदा आन्तरिक स्रोत तत्काललाई दरिलो नहुँदा संघले दिने अनुदान र राजस्व बाँडफाँँडमा निर्भर रहनुपरेको हो । तर, ससर्त अनुदानबाहेक संघबाट उपलब्ध स्रोत विनियोजन गर्न प्रदेश स्वतन्त्र छ । प्रदेशका आफ्ना प्राथमिकता र योजना छनोटमा केन्द्रमा निर्भर हुनुपरेको छैन ।
मुलुककै उत्कृष्ट प्रदेशका रूपमा परीभाषित गरिएको छ यो प्रदेशलाई । त्यस्तो के छ अरू प्रदेशको तुलनामा ?
अघि भनिएझैँ यो प्रदेशमा तीनै भौगोलिक क्षेत्रहरू रहेका छन् । त्यसमा पनि प्रशस्त कृषियोग्य जमिन भएको र औद्योगीकरण गर्न सहज रहेको तराई क्षेत्रले यो प्रदेशको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ । यस प्रदेशको पहाडी क्षेत्र पनि दुर्गम छैनन्, विविध कुरा उत्पादन गर्न सक्षम छन् । व्यावसायिक उत्पादन मात्र हुन नसकेको हो । विश्वप्रसिद्ध गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी यही प्रदेशमा छ । गौतम बुद्धसँग सम्बन्धित थुप्रै ठाउँ पर्यटन प्रर्वद्धनका आधार हुने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा पनि पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । प्रचार प्रसार र भौतिक पूर्वाधार पुराउन मात्र बाँकी हो । साथै, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको विस्तार पनि यस प्रदेशमा राम्रो छ । यस प्रदेशमा बुटवल–भैरहवा; घोराही, तुलसीपुर र कोहलपुर, नेपालगन्ज तीव्र दरमा विस्तारित तीनवटा सहर रहेका छन् । यी सहरमा आर्थिक गतिविधिहरू तीव्र दरमा विस्तार भइरहेका छन् । यस प्रदेशको आधा भूभाग वनजंगलले ओगटेको छ ।
नौमुरेबाट २ सय ४५ मेगावाटजति, कालीगण्डकी तिनाउ ड्राइभर्सनबाट १ सय ४ मेगावाट र भेरी बबई ड्राइभर्सनबाट ४८ मेगावाट र अपर झिम्रुख आयोजनाबाट १ सय मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिन्छ ।
विद्युत् उत्पादनमा प्रदेश २ पछि सबैभन्दा कमजोर अवस्था देखिन्छ यो प्रदेशमा । विद्युत् उत्पादनको सम्भावना नभएकै हो र ?
तुलनात्मक रूपमा त्यस्तो देखिएको हो । यस प्रदेशले ठूला सीमा नदीहरूबाट उत्पादित विद्युत्को सहजै फाइदा लिन सक्छ । प्रदेशभित्रै पनि नौमुरेबाट २ सय ४५ मेगावाटजति, कालीगण्डकी तिनाउ ड्राइभर्सनबाट १ सय ४ मेगावाट र भेरी बबई ड्राइभर्सनबाट ४८ मेगावाट र अपर झिम्रुख आयोजनाबाट १ सय मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिन्छ । अरू साना जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट पनि केही विद्युत् निकाल्न सकिन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशका मुख्य योजना के–के छन् ?
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा बढी जोड दिएको छ । यसअन्तर्गत सडक, पुल, सिँचाइ र खानेपानी आयोजनाहरू पर्छन् । यसका अतिरिक्त कृषिक्षेत्रको विकासका लागि उल्लेख्य बजेट छुट्ट्याएको छ, । व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरणमा जोड दिएका धेरै राम्रा कार्यक्रमहरू छन् । अर्कातर्पm पर्यटन पूर्वाधार विकासमा पनि जोड दिइएको छ । मुख्य कुरा, कार्यान्वयनलाई कसरी प्रभावकारी पार्ने भन्ने प्रमुख चुनौती देखिन्छ ।
प्रदेशमा काम गर्न कत्तिको सहज छ ? राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेप हुने गरेको छ या छैन ? योजना पारिदिनुपर्यो अथवा हाम्रो क्षेत्रमा यो योजना बनाउनुपर्यो भनेर प्रदेश सभासदहरूले कत्तिको दबाब दिने गरेका छन् ?
पर्याप्त जनशक्तिको अभाव र नयाँ संरचनाले गर्दा काम गर्न केही कठिनाइ त छ, तर दबाब र हस्तक्षेप छैन । हामीले सांसदज्यूहरूबाटै योजनाको सूची मागेका थियौं । केही आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गरेका छौ भने बाँकीको विश्लेषण भइरहेको छ । आगामी वर्षका लागि र समग्र योजना तयारीका लागि ती सूची सहयोगी हुनेछन् ।
अहिले भएको बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भई खर्च भएमा स्रोतका विभिन्न विकल्प खोज्न सकिन्छ ।
प्रदेशको आन्तरिक आय खासै धेरै देखिएन् । वृद्धि गर्ने थप योजनाहरू के–के हुन सक्छन् ।
सुरुका वर्षहरूमा आन्तरिक आय कमै रहने देखिन्छ । तर, आयका विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ । अहिले भएको बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भई खर्च भएमा स्रोतका विभिन्न विकल्प खोज्न सकिन्छ । वनजंगलदेखि खानीजस्ता प्राकृतिक स्रोतहरू यस प्रदेशमा रहेकाले स्रोत खोज्न कठिन नहोला भन्ने अपेक्षा छ ।
अन्त्यमा, यस्तै अवस्थामा कति वर्षमा प्रदेशको समृद्धि होला ?
विकास र समृद्धिको गति बजेट र योजनाको कार्यान्वयनमा भर पर्छ । प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिएमा छिट्टै आधारभूत विकास र समृद्धि हासिल हुन धेरै वर्ष नलाग्ला । सरकार एक्लैले भन्दा सरोकारवाला सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो भने चाँडै नै हामीले एक तहको समृद्धि हासिल गर्न सक्छौं । समझदारी, सहयात्रा र सहकार्यको खाँचो छ । उपलब्ध भौतिक पूर्वाधारलाई प्रयोग गरेर निजी क्षेत्रले आर्थिक गतिविधिहरू तीव्र दरमा बढाउनु जरुरी छ ।
बेरोजगारलाई प्राथमिकतामा नराखिएको गुनासो
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १ असारमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७
लचिलो मौद्रिक नीतिको पक्षमा निजी क्षेत्र
नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटिरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले
पर्यावरणजन्य विश्वव्यापी चुनौतीका मुखमा उभिएर हामीले वास्तवमै केही काम गर्नुपर्नेछ । उदाहरणका लागि पहिलो, नेपालले
सेयर लगानीकर्ताले आन्दोलन गरेर धितोपत्र बोर्डसँग शुक्रबार सम्झौता गरे । ५२ लाख सेयर लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व